Tantara: Ny Faran’ny Faharatsiana Rehetra - Tranonkala Ofisialin’ny Vavolombelon’i Jehovah
INONA no hitanao eto? Eny, taﬁka iray mitaingina soavaly fotsy. Nefa mariho ny toerana iaviany. Ireo soavaly dia midina avy any an-danitra eny amin’ny rahona! Moa ve tena soavaly any an-danitra ireo?
Tsia, tsy tena soavaly ireo. Fantatsika izany satria tsy afaka mihazakazaka eny amin’ny rahona ny soavaly, sa tsy izany? Nefa ny Baiboly dia miresaka ny amin’ny soavaly any an-danitra. Fantatrao ve ny antony iresahany toy izany?
Satria fahiny ny soavaly dia nampiasaina betsaka teo amin’ny ady. Ny Baiboly àry dia miresaka ny amin’ny olona mitaingin-tsoavaly avy any an-danitra mba hampisehoana fa manana ady atao amin’ny olona etỳ an-tany Andriamanitra. Fantatrao ve izay iantsoana ny toeran’io ady io? Hara-magedona. Hanafoana ny faharatsiana rehetra eto an-tany izany.
I Jesosy no hitarika izany ady ao Hara-magedona izany. Tadidio fa i Jesosy no noﬁdin’i Jehovah mba ho mpanjakan’ny ﬁtondram-panjakany. Izany no antony itondrany satroboninahitry ny mpanjaka. Ary ny sabatra dia mampiseho fa hamono ny fahavalon’Andriamanitra rehetra izy. Tokony ho gaga va isika satria handringana ny olona ratsy rehetra Andriamanitra?
Jereo indray ny Tantara Faha-10. Inona no hitanao eto? Eny, ny Safodrano lehibe izay nandringana ny olona ratsy fanahy. Iza no nahatonga an’io Safodrano io? I Jehovah Andriamanitra. Jereo izao ny Tantara Faha-15. Inona no mitranga eo? Ravan’ny afo nalefan’i Jehovah i Sodoma sy Gomora.
Avadiho mankao amin’ny Tantara Faha-33 ange. Jereo izay mitranga amin’ny soavaly sy ny kalesy ﬁadian’ny Ejipsianina. Iza no nahatonga ny rano hanafotra azy ireo? I Jehovah. Nataony izany mba hiarovana ny olony. Jereo ny Tantara Faha-76. Ho hitanao eto fa i Jehovah dia namela mihitsy ny Israelita olony hiharan’ny fandringanana, noho ny faharatsian’izy ireo.
Koa tsy tokony ho gaga àry isika raha haniraka ny taﬁny any an-danitra i Jehovah mba hamarana ny faharatsiana rehetra eto an-tany. Nefa hevero ange izay ambaran’izany e! Avadiho ny pejy ary aoka hojerentsika.
Apokalypsy 16:16; 19:11-16.
Nahoana ny Baiboly no miresaka ny amin’ny soavaly any an-danitra?
Inona no anaran’ilay ady hataon’Andriamanitra amin’ny olona ratsy eto an-tany, ary inona no antony hanaovana io ady io?
Iza no hitarika an’io ady io, araka ny hita eo amin’ny sary? Nahoana izy no manao satroboninahitra, ary midika ho inona ilay sabatra?
Nahoana isika no tsy tokony ho gaga raha handringana ny olona ratsy Andriamanitra, araka ny Tantara 10 sy 15 ary 33?
Ao amin’ny Tantara 36 sy76, inona no mampiseho fa handringana ny olona ratsy Andriamanitra, na dia milaza ho mivavaka aminy aza izy ireo?
Vakio ny Apokalypsy 19:11-16.
Ahoana no ampisehoan’ny Soratra Masina, fa i Jesosy Kristy no hitaingina ilay soavaly fotsy? (Apok. 1:5; 3:14; 19:11; Isaia 11:4)
Nahoana ny ra nifafy teo amin’ny akanjo ivelan’i Jesosy no manantitrantitra, fa tena handresy tanteraka izy? (Apok. 14:18-20; 19:13; Isaia 63:1-6)
Iza no mety ho anisan’ireo miaramila manaraka an’i Jesosy izay mitaingina soavaly fotsy? (Apok. 12:7; 19:14; Matio 25:31, 32)